Xildhibaan Ka Tirsan Baarlamaanka Konfur-Galbeed Oo Baydhabo Lagu Dilay Iyo Xiisad Ka Taagan. – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdishakuur Buule oo ka tirsanaa Xildhibaannada Koonfur Galbeed, ahaana guddooniyihii guddiga amniga ee Baarlamankaas ayaa lagu dilay saakay magaalada Baydhabo xilli magaaladda Baydhabo Maalintii labaad ay ka soconayaan dibad Baxyo rabsho wata oo mararka qaar laga maqlayo rasaas.
Nabadoon Caliyow Abuukar Ayaa u xaqiijiyay Kalfadhi in xildhibaanka la toogtay xilli uu maraayay Agagaarka Xarunta Bankiga ee Magaalada Baydhabo “waxaa uu u dhintay risaas ay soo rideen ciidanka dowladda, oo aad uga foojignaa dadka samaynayay Banaanbaxa ” ayuu yiri Nabadoon Caliyow Abuukar.
Magaalada Baydhabo ayaa maanta waxaa markale ka taagan xaalad daganaansho la’aan ah waxaana ka soconaya dibada baxyo rabshado wata, inta badan waxaa xiran goobaha ganacsiga iyo dhaq dhaqaaqay gaadiidka dad waynaha ee Magaalada.
Rabshadaha iyo xiisada ka taagan Magaalada Baydhabo ayaa waxaa sababay xarigga Musharrax Muqtaar Roobow Cali oo laga soo qabtay Magaaladda Baydhabo, waliba si qasan ah taas oo ay ka caraysan yihiin inta badan shacabka Koonfur-Galbeed .
Musharraxa Muqtaar Roobow Cali ayaa waxaa lagu hayaa Magaaladda Muqdisho, oo lakeenay shalay galinkii dambe, Ciidanka booliska ee Magaaladda Baydhabo ayaa lagaliyay heegan kii ugu balaarnaa shalay iyo maanta si ay u wajahaan xaaladda kacsan ee Magaaladda Baydhabo